MAHAJANGA 2018 : Vavaka JMJ Mada 9 | Madatopinfo
Ry Andriamanitra Rainay ô, misaotra Anao izahay tamin’ny nanomezanao anay an’i Md Joany Paoly faharoa, ilay nampibaribary teo anivon’ny Eglizy Katolika fa fotoana sarobidy iainana ny fahamasinana ny fahatanorana. Nasehon’ireo Olomasina sy Olontsambatra mpiaro ny JMJ Mada andiany faha 9 izany teo amin’ny fiainany andavanandro mba ho ohatra velona tokony hiainan’ny tanora.
Koa mihanta Aminao izahay, ampitomboy ny finoanay Anao mba hahafahanay miaina sy mitory ny Vaovao Mahafaly eto amin’ny Nosinay indrindra amin’izao taona anentanan’ny Papa Fransoà ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao sy ity taona miavaka hankalazana ny Sinaodin’ny tanora maneran-tany ity.
Ny fanahinao Mpankahery anie hanampy ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy hitarika anay amin’izany. Toroy hevitra hatrany ireo Pretra sy Relijiozy, ny tanora sy ireo rehetra mifarimbona amin’ny fanomanana sy fiatrehana izao Andron’ny Tanora Maneran-tany izao.
Tantano ihany koa izahay tanora manerana ny Nosy hanomana ny fo amam-panahinay amin’ny Vavaka sy amin’ny lafiny rehetra. Hamafiso ny fiombonana sy ny fifanampiana eo aminay mba hahatratraranay ny tanjon’ny JMJ ka ho “tanora apostôlin’ny tanora” tokoa anie izahay, hanana toe-tsaina miavaka, miombona, miafy sy mifampizara.
Dia hotanterahinay anie ny sitra-ponao ry Ray, toy ny nanatanterahan’ilay Renin’ny Zanakao azy ka nilazan’ny Anjely taminy hoe : “Aza matahotra ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra Ianao”.
Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay no angatahinay izany.
Ny Ekipan’ny Madatopinfo-France sy GazetteMadagascar-Philippines ary ny eto Madagasikara rehetra dia mirary fahasoavan’Andriamanitra ho antsika rehetra amin’izao andron’ny Tanora izao.